India: Sei chiMalasia chikafu chichienda kune mbavha | India News - TELES RELAY
HOME » pasi rose India: Sei chiMalasia chikafu chichienda kune mbavha | India News
CHENNAI: Mutungamiriri wehotera muMalaysia, akatendeukira kumbavha muKennai kuti atenge mumwe wevadzidzi vake. K Sahul Akarongedzwa neHurris muKerala, a polyglot ye39 kaviri akaroora uye aifanira kuroorwa kwechitatu, ikozvino ari mutirongo. Mapurisa emigwagwa, ayo akamusunga musi weChishanu, akati akawana 110 gold jewel rulers, anokosha pamusoro pe28 Rs lakh, akabiwa kubva kune vashambadziri ve29 uye akapikira kune vateresi mubayiro muThrissur uye Mumbai.
Rimwe boka rakakosha rinosanganisira DGP (Railways) C Sylendra Babu uye DIG (Railways) V Balakrishnan akawana 7 May 'murume akapfeka zvakanaka' achifamba achienda kuCentral Chennai ndokumumisa. Akapa zita rake kuna Sahul Hameed uye akati ari kutamba kubva 2016. Mushure mekutsvakurudza zvakadzama, akasungwa.
Imwe mapurisa akati Sahul Hameed akanga achitamba hotera yeNiche Valley Kuala Lumpur muMalaysia, pamwe chete nevamwe vaviri, mudzimai wake Sahana nevana vavo vaviri. Akaendesa kuKennai ndokukwira terevhisi usiku muguta reKerala, kutenga mabhidhi uye mabhosi ekirasi.
Akaudza mapurisa kuti akanga atarisa vapfumi vakapfuma, kunyanya vakadzi vachifamba voga kuKerala. "Aizouya pachiteshi kwemaawa angangotanga teregi isati yasimuka uye" sarudza "vashandi vake," akadaro Balakrishnan. Aizomirira kusvikira manheru usiku kuti arove.
Chikwata chemapurisa chinomutora kuenda kunzvimbo yaakavimbisa kuti achabvisa goridhe yakabiwa ndokuiwana. Maererano neDIG, Sahul Hameed, uyo akashanyira munharaunda ye11 nyika uye anonyatsotaura mumitauro mitanhatu, akaronga mafashoni anoratidza mwedzi mumwe nomumwe muhotera yake. Akaudza mapurisa kuti aizounza mienzaniso kubva kuAlgeria, France, Netherlands neUzbekistan uye vaizovatsanangurira sevakasununguka kumabhizimisi makuru.